Anti Slip Safety Tread Plates Factory - China Anti Slip Safety Tread Plates mpanamboatra, mpamatsy
Side amin'ny takelaka aluminium
Ny alimo aluminium sy aliminioma dia lasa mpikambana matanjaka amin'ny indostria maoderina isan-karazany ankehitriny. Mandritra izany fotoana izany, ny vokatra avo lenta amin'ny aliminioma mahazatra dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiainantsika ankehitriny.
Anti-slip slip Checker Plate tohatra tohatra
Ny takelaka fanitsakitsahana ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alim-baravarana dia vita ary azo amboarina mifanaraka amin'ny karazana faritra mety malama, mampidi-doza ary mampidi-doza, toy ny harato / grille, takelaka misy takelaka, takelaka aluminium, beton, hazo.
Amin'ny alàlan'ny fanasokajiana alloys aliminioma etsy ambony, ny takelaka aluminium dia azo zaraina amin'ny karazany maro koa. Ny fitsipika lehibe voalohany dia ny fitaovana vita amin'ny takelaka.
Ny vidin'ny takelaka aluminium dia tsy vitan'ny antony iray ihany. Ny vidin'ny tsena amin'ny alimo aluminium sy aliminioma dia hiova matetika, noho izany ny vidin'ny akora vita amin'ny takelaka aluminium dia tsy mijanona. Ankoatry ny vidin'ny akora fototra, ny vidin'ny takelaka aluminium dia hisy fiantraikany amin'ny antony maro hafa.
Takelaka Aluminium 1100 amin'ny famokarana
Mbola misy toetra mampiavaka azy manokana sy toetra mampiavaka ny firaka aliminioma 8 andiany. Satria ireo fananana kilasy voalohany an'ny alimina mifototra amin'ny aliminioma ireo, ny takelaka aliminioma dia nanjary be mpampiasa kokoa amin'ny fiarahamonina maoderina. Noho izany, ny fomba hisafidianana ny takelaka takelaka mety indrindra ho an'ny orinasanao ary ohatrinona ny takelaka aluminium no tsy maintsy alamina haingana ny olana rehetra.
Takelaka aluminium 1060 Amidy
Ny takelaka fitaratra aliminioma dia manondro takelaka alimina manify novokarin'ny fomba maro samihafa toy ny mihodina sy ny poloney. Ahitana taratra hazavana amin'ny fomba mandaitra, antsoina koa hoe ravin-taratra. Ny sosona miaro manify dia matetika apetaka handrakofana ny tampony. Ny loko iraisana dia ahitana manga, volafotsy, mavo ary maitso.